Januwari 25 Zodiac - Ubuntu Obugcwele Be-Horoscope - Izimpawu Zomgamu Wezulu
Main Izimpawu Zomgamu Wezulu Januwari 25 I-Zodiac yi-Aquarius - Ubuntu obugcwele beHososcope
Januwari 25 I-Zodiac yi-Aquarius - Ubuntu obugcwele beHososcope
Isibonakaliso se-zodiac sangoJanuwari 25 yi-Aquarius.
Uphawu lwezinkanyezi: Umphathi Wamanzi. Le yi uphawu lwe-Aquarius zodiac kubantu abazalwa ngoJanuwari 20 - Februwari 18. Iphakamisa ukuvuselelwa nenqubekela phambili kanye nesimo sozwelo salaba bomdabu.
I- I-Aquarius Constellation , omunye wemilaza engu-12 yezinkanyezi ubekwa phakathi kweCapricornus kuya eNtshonalanga nePisces eMpumalanga kanti ububanzi bayo obubonakalayo bungu- + 65 ° kuya -90 °. Inkanyezi ekhanya kakhulu yi-alpha Aquarii ngenkathi ukwakheka konke kusakazeka kuma-degree angama-980 sq.
Igama elithi Aquarius livela egameni lesiLatini le-Water Bearer, ngesiGreki uphawu lukaJanuwari 25 uphawu lwe-zodiac lubizwa nge-Idroxoos, kanti ngeSpanishi yi-Acuario kanti ngesiFulentshi yiVerseau.
Isibonakaliso esiphikisayo: Leo. Lokhu kusho ukuthi lolu phawu noluphawu lwelanga lwe-Aquarius lusebudlelwaneni obuhambisanayo, luphakamisa ukuthula nokuphumula nokuthi yini enye engenakho nokunye okuphambene nalokho.
Isimo: Kulungisiwe. Ukuziphatha kuphakamisa isimo esiphikelelayo salabo abazalwa ngoJanuwari 25 nothando lwabo nokudlulela ezimweni eziningi zempilo.
Indlu ebusayo: Indlu yeshumi nanye . Le ndlu ifanekisela amaphupho, izinhloso eziphakeme kanye nobungani futhi iveze ukuthi kungani lokhu bekuhlale kudlala indima ebalulekile ezimpilweni zama-Aquarians.
Umzimba obusayo: Uranus . Lo mbusi weplanethi uphakamisa ukudlula nokuziqhenya. I-Uranus yiplanethi entsha esanda kutholakala. Kuyafaneleka futhi ukusho ngengxenye yesintu.
Into: Umoya . Lesi yisici esiphakamisa ibhalansi ezimpilweni zalabo abazalwe ngaphansi kuka-Januwari 25 zodiac kodwa nangendlela abaxhumeka ngayo kukho konke okwenzekayo okubazungezile.
Usuku lwenhlanhla: NgoLwesibili . I-Aquarius ikhomba kahle kakhulu ukugeleza kwangoLwesibili onqunyiwe ngenkathi lokhu kuphindwe kabili ukuxhumana phakathi kukaLwesibili nokubusa kwayo yiMars.
Izinombolo zenhlanhla: 3, 9, 15, 17, 27.
Imininingwane engaphezulu ngoJanuwari 25 Zodiac ngezansi ▼
Januwari 6 Izinsuku Zokuzalwa
Owesifazane we-aquarius futhi uphonsa indoda embhedeni
ukuhambisana okuhle kwendoda ye-aquarius
Januwari 1 ukuhambisana kwezimpawu zezodiac
umdlavuza indoda nowesifazane wesifazane umshado
yini i-zodiac ngo-septemba 19
siyini isibonakaliso se-zodiac sango-februwari 8